Wasiirka Madaxtooyadda: Masuul ALLE u Aqbalay Wacadkii uu Bulshadda u maray | Somaliland.Org
Wasiirka Madaxtooyadda: Masuul ALLE u Aqbalay Wacadkii uu Bulshadda u maray
January 2, 2013	Waa Dhalinyaro, Haddana waa waayeel iyo ruug-cadaa gaadiiday. Dul-qaadkiisa aan xadka lahayn ayaa hal-beeg u ah noociyadda shakhsiyadiisa bislaatay.
Ku darso oo waxa uu madaxa uun la galayaa da’da afartameeyadda. Waxa uu si waadix waajibaadkiisa shaqo ee Wasaaradda madaxtooyadda ugu cadeeyay shacbiga Somaliland 16-kii July 2011 oo ahayd maalintii xilka Wasiirnimo aqalka Wakiiladdu u ansixiyeen “Shaqadaydu waa inaan agaasimo, isku dubo-rido, qorsheeyo u diyaariyo Madaxweynaha hawl maalmeedkiisa shaqo ee xafiiskiisa, xidhiidhiyana xafiisyada la xidhiidha madaxtooyada,”ayuu yidhi Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan oo hadal kooban ka horjeediyay Xildhibaanadda Golaha Wakiilladda daqiiqado ka hor intii aan la ansixin.
Malaa Samadda ayaa furnayde’ Waxa ALLE u aqbalay oo uu ka jibo keenay wacadkii uu ku maray inuu xilkiisa uga soo bixi doono si hufan, waxaanu yidhi “Waxaan rajaynayaa in xilkayga shaqo uu yahay mid siyaasadeed oo Madaxweynaha ka kaalinaysa shaqada uu Hoggaamiyaha ka yahay, waxa is bedelaya shaqadii xafiiskii aan hore uga shaqayn jiray ee Chief of cabinet-ka oo aan ahaa madaxa shaqaalaha madaxtooyada. Waxa isbedelaya inaan awood u yeesho inaan ka hadli karo, cabiri karo oo aan u guntan karo hawlaha siyaasadeed halka markii hore shaqadaydu ahayd shaqo ku koobnayd madaxtooyada ayna ka baxsanayd arrimaha siyaasada.”
Waa Masuul shaqo badan oo wuxuu celcelis ahaan todobaadkiiba shaqeeyaa 70 saacadood. Haddii si kale aan u idhaahdana waxa uu maalin kasta xafiiskiisa ku negaadaa muddo toban saacadood aan ka yarayn. Mar-marna waxa uu kaltankiisa shaqo u qeybiyaa sideed saacadood oo maalintii ah iyo laba saacadood oo habeenkii ah.
Shaqada adag ee uu qarankiisa u hayo iyo marinka xasaasiga ah ee fadhiyo ayaa sababay inay dad dano siyaasadeed leh oo muxaafid iyo mucaaridba iskugu jiraa ay si qiyaas la’aan ah ay dagaalo dahsoon iyo mid toos ahba la galeen Wasiirkan. Waxase uu arrimahaasi kaga gudbaa afgaabni iyo dul-qaad uu u dhashay.
Waxa maalin kasta bogaga mareegaha Internet-ka lagu soo daabacaa maqaalo, xambaarsan xiqdi, xajiimayn, xasad kuwaasi oo loogu dan leeyahay in lagu nashuushadeeyo shakhsiyadiisa.
Si kastaba arrintu ha ahaatee waxaan la dafiri Karin in Wasiirka Madaxtooyaddu uu yahay nin sida uu uga soo dhalaalay shaqadiisu ay u abuurtay in dad danaysteyaal ahi ay qandaraasyo ku qaataan aflagaadeyntiisa.
Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa uu tusaale u yahay jiilka cusub ee riyadoodu tahay inay ka qeyb qaataan siyaasada wadanka oo ay ka muuqdaan goleyaasha qaranka ee kala duwan. Waxa uu noqon karaa mid ay ku hirtaan ama ugu yaraan inay is aqoonsadaan dhalinyaradu inay xilal waa weyn ka qaban karaan dalka, haddii ay la yimaadaan juhdigeedda.
Previous PostMadaxweyne Siilaanyo Oo Cisbitaalka Ku Booqday Dhaawacyadii shilkii Baabuur ee Ka Dhacay HaleeyaNext PostCuqaal iyo Waxgaradka Degmada A/Dhagax oo Dadweynaha u soo jeediyay ilaalinta Nabad-gelyadda	Blog